PressReader - Isolezwe: 2017-10-13 - Abasejele bakulungele ukubhala
Abasejele bakulungele ukubhala
Isolezwe - 2017-10-13 - IZINDABA - PUMLA MSOMI
SEBEZILINDE ngabomvu izivivinyo zika-matric zokuphela konyaka abafundi besikole sasejele laseWestville, i-Usethubeni Youth.
Laba bafundi baka-matric nabanye abebeqeqeshelwa amakhono ehlukene, izolo bebeklonyeliswa ngezitifiketi zokwenza kahle ezifundweni zabo kusukela kuqale unyaka.
USamkelo Mpofana owenza u-matric uklonyeliswe ngendondo yokwenza kahle ezifundweni zakhe kusukela kuqale unyaka kanti uthe noma iphepha lingafika manje usengalibhala aphumelele ngamalengiso.
Ujabule kakhulu ngokuthola le ndondo ngoba ngesikhathi eboshwa ngo-2015 walahla ithemba ngenxa yokutho wayeyobhadla ejele. “Ngijabule kakhulu, bengingalindele ukuthola lo mklomelo. Ngiyabagqugquzela nabafowethu engifunda nabo ukuthi babukele kimi. Ngabangani bami esasisebenzisa nabo izidakamizwa ngaphandle ngiyabagqugquzela ukuthi bazimisele esikoleni ukuze bakwazi ukuzimela.”
Uthishanhloko wesikole Usethubeni uNkk Nelly Mkhize uncome abafundi balesi sikole ngokuzimisela kwakhe ngoba yize ebe nenkinga yokugula kulo nyaka kodwa bebelokhu bexhumana naye bekhuleka ndawonye ukuze alulame nabo baphumelele ezifundweni zabo.
Uthe likhona ithemba kumuntu ophuma ejele uma esebuyela emphakathini.
UKhomishana wamajele aseThekwini, uNkk Nonhlanhla Dlamini, uthe izingane ezisuke ziboshiwe zidinga uthando nenhliziyo ende. Abebeklonyeliswa benze kahle ezifundweni ezehlukene okubalwa iGeography, Maths, Life Science nezinye kanti abanye bebeklonyeliswa ngokuphumelela ezifundweni zamakhono okubalwa kuzo ukwakha, ukufaka ama-tiles nokunye.
Isithombe: NONTUZI PHOTOGRAPHY
UKHOMISHANA wamajele eThekwini uMqondisi Nonhlanhla Dlamini, nomfundi owenze kahle uSamkelo Mpofana noMqondisi uJappie Taljaarb ngesikhathi kuklonyeliswa abenze kahle nonyaka ejele eWestville